Wear OS: Android Wear dia nomena anarana anarana | Androidsis
Ao anatin'ny ekosistema Android dia manana kinova samihafa momba ny rafitra fiasa izahay. Ireo no kinova izay mifanaraka amin'ny fitaovana (Android TV na Android Wear dia ohatra tsara amin'izany). Na dia misy fiovana lehibe aza ity farany. Satria tsy mitovy ny anarany. Izao dia ho OS OS. Io no nambaran'ny Google.
Ny fivarotana famantaranandro miaraka amin'ny rafitra fiasan'i Google dia mbola tsy nitsaha-nitombo araka ny itiavan'ny orinasa azy. Raha ny marina dia hitan'izy ireo fa mihoatra lavitra azy ireo i Apple amin'ity lafiny ity. Noho izany ilaina ny fanovana. Toa nanapa-kevitra ny hanomboka amin'ilay anarana izy ireo. Ny rafitra fiasa vaovao dia hatao hoe Wear OS.
Ankoatra izany, io fanovana io dia efa manomboka mandaitra. Satria ireo mpampiasa izay manamboatra ny famantaranandrony marani-tsaina ankehitriny, dia efa mahita ny fomba ananan'ny rafitry ny fiasa anarana vaovao. Ka toa hita fa efa ampiharina amin'ny fomba ofisialy ny Wear OS.
Na dia antenaina ho vita mandritra ny herinandro vitsivitsy aza ny fanovana anarana. Amin'ity fotoana ity, ireo mpampiasa manana famantaranandro dia hahita ny fomba hiovan'ny anaran'ny rafitra sy ny kisary. Saingy tsy zavatra mbola nahatratra ny mpampiasa tamin'ny famantaranandro Android Wear io.
Raha misy fiovana eo amin'ny rafitra fiasa mihitsy, tsy nisy na iray aza naneho hevitra. Tsy hahagaga raha te-hanomboka ny Wear OS amin'ny fanovana sasany na famolavolana vaovao i Google, saingy tsy te-hilaza na inona na inona momba izany ny orinasa. Ka tsy maintsy miandry isika vao hahita azy.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy zatra ny anarana vaovao an'ny rafitra fiasa isika. Wear OS dia toa fanovana somary hafahafa eo amin'ny orinasa. Saingy mety ho fampiroboroboana ny smartwatches Android izany. Hifantoka amin'ny vaovao mety horesahina isika amin'ny andro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Nanova ny anarany ny Android Wear ary lasa Wear OS